Iftekhar Villa - kuMgangatho ophantsi - I-Airbnb
Iftekhar Villa - kuMgangatho ophantsi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguZubair
Indawo entle ekhoyo kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko kunye ne-backup yamandla kunye ne-air cooler. Iholo enkulu kunye negumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela elinye kunye nekhitshi. Ikhitshi libandakanya zonke izixhobo zokupheka. Indawo inokuhlala ngokulula abantu aba-4. Ukungena kwaBucala. Indawo ecocekileyo, enoxolo kwaye ezolileyo. Ukupaka kukwafumaneka ngokulula xa ubonwa. Isikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe kukuhamba nje kwemizuzu engama-20 uqhagamshelwe ngendlela ye-PVNR. Kwaye ngaphezu kwayo yonke loo nto, le ndawo inomamkeli omangalisayo ngokunjalo.
Iholo enkulu kunye negumbi elinye lokulala elinendawo yokupholisa umoya kunye negumbi lokuhlambela elinye kunye nekhitshi.
4.78 · Izimvo eziyi-140
Indawo enoxolo nezolileyo
Umbuki zindwendwe ngu- Zubair
Ifumaneka ngokubhaliweyo okanye ngomnxeba